Taiwan Tourism Bureau kupedzisa marezinesi emahofisi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Taiwan Kupwanya Nhau » Taiwan Tourism Bureau kupedzisa marezinesi emahofisi
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Taiwan Kupwanya Nhau • ushanyi
Taiwan Tourism Bureau iri kusimudzira pekugara zviri pamutemo uye inopera "isina mvumo rentals ”. Hurumende ichaongorora zvakaomarara varidzi vezvivakwa zve isina mvumo rentals mukuyedza kupa yakachengeteka uye yepamberi pekugara kune vashanyi vepasirese.
Vanopfuura mazana mashanu vevashanyi vanobva kunzvimbo dzakapoteredza chitsuwa vakapfekedzwa maT-shirts ane chirevo che "Kudzosera Kumutemo Usiri pamutemo" kutsigira kuedza kwehurumende kudzora marendi asina mvumo ane simba rakakura Taiwan's kufamba kwekuchengetedza uye mufananidzo.
Vanoverengeka vepamusoro-soro vanopa sevhisi vanopa in Taiwan, kusanganisira Ez Travel, Cola Tour, Star Travel, Ezfly International Travel, uye Lion Travel varumbidzwawo pamusangano wenhau nhasi. Vakasimudzirana uye vakatora mhiko pachikuva kupikisa kutengeswa kwemarozenisi asina marezenisi vachinyatsosimudzira iwo emahotera emutemo. Iyo Bureau yakaratidza kubvumidzwa kwayo uye yakavimbisa ruzhinji rwevanhu kuti kuchengetedza nzvimbo munzvimbo dzekufamba kwavo kwakachengeteka. Kune avo vekunze OTA vasingakwanise kuenda pachiitiko ichi, Rakuten anovimbisa kuti anozotarisa nekupokana nematarenda asina marezenisi, nepo Kubhuka.com uye Agoda vimbisa ku kurwisana isina mvumo rendi kana vagamuchira mushumo kutyora mishumo. Taiwan Tourism Bureau ichashambadza mazita emapuratifomu asingatsigire paTaiwanStay.net (https://taiwanstay.net.tw/) uye kuburitsa zvinoburitsa nhau nechinangwa chekuchengetedza kuchengetedza kwevafambi.
Data kubva kuAirDNA, yepasi rese data ongororo webhusaiti, yakaratidza kuti ekutanga mapoka evatengi evanodzokera uye vafambi vanorenda dzimba pfupi-pfupi vanhu vechidiki. ane makore ari pakati pe21 ne30 avo vane zvishoma kushomeka kwakazara kwekuchengetedza.
Mumakore achangopfuura, iyo Bureau yakaramba ichisimudzira pfungwa yekugara zviri pamutemo, uye kuyedza kwayo kunounza michero. Kunze kwekushanda pamwe nehurumende dzemunharaunda mukumisikidza faindi, zvirango uye kuvharwa kwemabhizinesi, hofisi yeDhipatimendi reKufamba uye pekugara yakatiwo hurumende yakadzora kutengeswa kwe isina mvumo rendi kubva kumahofisi ekufamba. Zvichakadaro, hofisi yacho yakaisawo mitero inorema uye zvirango zvakakurisa isina mvumo kutengesa kwekuregererwa kwemaroja kwakapihwa nekufamba kwemhiri kwemakungwa e-commerce makambani.
Huwandu hwenzvimbo dzekutanga dzekufambisa mafambiro mu Taiwan varumbidzwawo pamusangano wenhau nhasi. "Taiwan ine anopfuura makumi ezviuru emahotera emutemo nemaB & Bs, zvinoreva kuti kune zvakakwana hotera mumusika wekufamba, ”Ez Travel akadaro. “Basa remasangano ekufambisa rinofanirwa kunge richikurudzira nekushandira pamwe nemahotera ari pamutemo, zvichiita kuti indasitiri yezvekushanya iwane mukana wekukunda. Mutengi nharo dzinobva mukutengesa kwezvakachipa uye isina mvumo kubhadharisa mari kunokanganisa chimiro chemasangano ezvekufambisa uye kunokonzera kurasikirwa kukuru kwavari. ”
Sangano rekunze kwenyika, veLion Travel, vakataurawo kuti richapa vatengi maB & B akachengeteka, akachena nemitengo iri pasi. Asi kana hurumende dzenzvimbo dzikawana chero kutyorwa nekuzvisimbisa, zvigadzirwa zvine chekuita nehotera zvaizobviswa pawebhusaiti yavo yekufamba.
Bureau yakaratidza kuti Taigoci.com inopa ruzivo rwakadzama nezvekufamba zviri pamutemo uye pekugara zvinogona kubatsira kudzikisa njodzi yekufamba uye kuwedzera kuchengetedzeka mundangariro dzinofadza dzekufamba.
Iwo epamberi ekufamba mawebhusaiti akakurudzirwa na Taiwan's Tourism Bureau ndeinotevera:
EZ Kufamba , Shumba Kufamba, Colatour Kutanga, Nyore Fly